Phinda ukubhaliswa FILERECOVERY® Software Mac ne-PC | Data Recovery
Phinda ukubhaliswa FILERECOVERY® Software Mac ne-PC
Home → Phinda ukubhaliswa FILERECOVERY® Software Mac ne-PC
Kuyamangaza ukuthi amazwi ambalwa nje elula efana “Ifayela ayitholakalanga”, “Iphutha Card” noma “image esusiwe” ngeke ukwesabisa izinhliziyo ngisho elitheni abasebenzisi computer. Nokho, izingozi singawanika kwenzeke. Kodwa ngcono software yakho, uzoba nilungele noma yini okungase kusehlele esikhathini esizayo. yakho Intengo ukuthuthuka yokonga of 50% ukuvala intengo!
Futhi uyoba nethuba uthuthukela kunguqulo Professional izici ezengeziwe ezifana raid ukweseka. Sicela uchofoze isithonjana okwesikhathi Ishadi Ukuqhathanisa.
ukuvuselela, uzodinga ukulanda futhi ufake inguqulo entsha software ngemuva kokuthi uqede ukuthenga sokuvuselela. Khona-ke, kokufaka inguqulo entsha uzosusa inguqulo endala futhi zikuvumela ukuthi kusebenze usebenzisa inombolo entsha ye-serial kusuka irisidi yakho.
FILERECOVERY Standard-Windows $34.95
FILERECOVERY Pro lwe-Windows ** $49.95
*lwe-Windows® XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10, **raid Ukusekela
*Mac OS 10.8 noma Ephakeme, **raid Ukusekela
** QAPHELA macOS 10.15 Abasebenzisi - Le software ayihambelani ngokugcwele macOS ezisanda kuphuma 10.15 (Catalina) isistimu Esebenzayo, futhi ngeke lusebenze kahle ukuthi OS.
Inguqulo ebuyekeziwe le software, okuzoba iyahambisana macOS 10.15 (Catalina), maduzane kakhulu. **